स्वास्थ्य पेज » महिलाले यसरी गर्नुपर्छ हस्तमैथुन ! महिलाले यसरी गर्नुपर्छ हस्तमैथुन ! – स्वास्थ्य पेज
हस्तमैथुना पुरुष महिला सबैले गर्छन तर धेरैलाई थाहा हुँदैन कसरी गर्ने भन्ने । पुरुषले आफ्नो लिङ्ग खेलाएर अस्त मैथुन गर्ने कुरा त धेरैलाई थाहा छ । पुरुषलाई जस्तो हस्त मैथुन गर्न महिलालाई सजिलो नहुने गुनासोहरु यौन सँग सम्बन्धित डाक्टर सम्म पुग्ने गर्छन । आज हामीले एजेन्सीको सहयोगमा महीलाले कसरी हस्त मैथुन गर्ने भन्ने विषय उठान गरेका छौं ।
पुरुषको हस्तमैथुन गर्ने तरिकाको तुलनामा महिलाकोमा हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा धेरै विविधता हुन्छ। पुरुषहरूले लिंगलाई हलाएर हस्त मैथुन गर्छन भने महिलाहरूले उनीहरूका विभिन्न यौनअङ्गहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर हस्तमैथुन गर्न सक्छन।
कुनै पनि यौन क्रिडामा महिलाको योनीको भगाङ्कुरको घर्षणले महिलालाई चरमसुखमा पुग्न सहयोग गर्दछ । भगाङ्कुर चलाउन कुनै पनि सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुराले यसलाई चलाउने वा घर्षण गर्न सकिन्छ । हात वा तेस्तै अरु कुनै कुराले चलाउनुका साथै दबाब दिने, हल्लाउने आदि क्रिडा गर्न सक्नुहुन्छ। नुहाउने बेलामा पानीको हल्का फोहराले पनि धेरै महिलाहरू उत्तेजीत हुने र यौनशुख प्राप्त गर्न सक्छन ।
भगाङ्कुर सलाउनुको साथै योनिमा केही पसाएर पनि यौन आनन्द लिन सकिन्छ। यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा योनीरस नभएमा घर्षणले पीडा हुने र घाउ हुने सम्भावना पनि हुन्छ तेसैले योनीरस पर्याप्त नभए अन्य कुनै चिप्लो पदार्थको प्रयोग गरे पनि हुन्छ ।
मानिसलाई प्रकृतिले नै सबै भन्दा राम्रो यौन साधन दिएको छ औंला । योनि र भगाङ्कुरलाई चलाउने होस् या योनी भित्र पसौना औंलाको प्रयोग गर्नु सजिलो र आरामदायी हुन्छ। औंलाले चाहेअनुरूपको दबाब, गति र तरिका अनुसार यौन शुख प्राप्त गर्न सकिन्छ । योनी बाहेक महिला शरीरका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श गर्न सुम्सुम्याउँण र मर्दन गर्न पनि औला जस्तो सजिलो अरु केही हुँदैन ।